Iwo Akanakisa WordPress plugins kune Yako Bhizinesi Saiti
Chipiri, January 26, 2021 Chipiri, February 9, 2021 Douglas Karr
Urwu ndirwo runyorwa rweangu akakurudzirwa WordPress plugins emabhizinesi ekuvandudza uye kugadzirisa yavo WordPress saiti mune inbound kutendeuka saiti. Ini ndinochengeta zviri zvechizvino sezvo nyowani plugins inosunungurwa.
Tuesday, January 26, 2021 Tuesday, February 9, 2021
5 Zvakakosha Zvimiro Zvekutarisa mune YePamhepo Fomu Kuvaka Platform
Muvhuro, Nyamavhuvhu 10, 2020 Muvhuro, Nyamavhuvhu 10, 2020 Rachel Skroback
Kana iwe uchitsvaga iri nyore, inoshanda, uye yakachengeteka nzira yekutora iyo ruzivo iwe rwaunoda kubva kune vako vatengi, vanozvipira, kana tarisiro, mikana ndeyekuti iyo online fomu anovaka anogona kuwedzera yako kugadzirwa exponentially. Nekushandisa yepamhepo fomu anovaka pasangano rako, iwe unozogona kuregedza nguva-inopedza manyorero maitiro uye chengetedza yakawanda nguva, mari, uye zviwanikwa. Nekudaro, kune maturusi akati wandei kunze uko okusarudza kubva, uye kwete ese online fomu vavaki vakagadzirwa vakaenzana.
Cookies Haachisiri Kukosha Mari: Sei Kuzivikanwa uye Kugadziriswa kuri Kuchinja muPost-Cookie Nyika
Mugovera, Kubvumbi 18, 2020 Mugovera, Kubvumbi 18, 2020 Diaz Nesamoney
Kana isu tikapinda muUber app yedu, zvinobva zvango dhonza kumusoro kwedu kwazvino nzvimbo. Patinoshanyira webhusaiti yezvipfeko, tinoona zvakataurwa zvinhu zvakatorwa pane zvatakatenga kare. Kana isu tichitarisa pamisasa magiya pamhepo, tinokurumidza kupihwa inoenderana nemabhanhire kushambadzira kune izvo zvinotengeswa. Kana isu tavhura Google kana Apple Mamepu, tinopihwa zvinowanzo shanyirwa nzvimbo zvinoenderana nenguva nenzvimbo iripo. Izvo zvese ndezvekusarudzika uye zvese zvinhu zvinodzikira kuchinhu chimwe -
Iyo Yekuzivikanwa Pikicha muCustomer Dhata Management
China, Gumiguru 18, 2018 Mugovera, Kukadzi 13, 2021 Sameer Narula
Dambudziko Rekuzivikanwa Kwevatengi Mune ngano dzechiHindu, Ravana, nyanzvi huru, uye mambo wedhimoni, ane misoro gumi, achimiririra masimba ake akasiyana siyana neruzivo. Misoro yacho yaisaparara nekugona morph uye kudzoka. Mukurwa kwavo, Rama, mwari murwi, saka anofanira kuenda pasi pemisoro yaRavana uye kunanga museve pamoyo wake wega kuti amuuraye zvachose. Munguva dzemazuva ano, mutengi akada kufanana naRavana, kwete maererano neyake